Ny fampiasam-bola mora amin'ny audio dia hampitombo ny firotsahana horonantsary | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 8, 2014 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo antony nanombohanay ity andian-dahatsary ity dia ny fampisehoana ny fomba mora hanoratana sy hamoahana horonan-tsary hanampiana ny paikadinao amin'ny varotra ankapobeny. Sokafy ny Mac na PC maoderina anio ary misy fakan-tsary sy mikrô natsangana vonona handrakitra ny horonan-tsarinao 1 minitra manaraka. Afo ny programa fandraketana anatiny dia lasa ianao! Misy olana kely iray anefa.
Mahatsiravina tanteraka ireo mikrô izay tonga ao anatiny. Fantatrao ve fa hijanona tsy hijery horonantsary mahafinaritra amin'ny feo mahatsiravina ny olona…. ary mijery horonantsary misy horonantsary tsara kalitao nefa tsara feo? Ny audio dia lakilen'ny fidirana amin'ny horonantsary. Ary tsy mila mampiasa vola be amin'ny fampitaovana audio ianao. Te-hanaporofo izany aho amin'ny alàlan'ny firaketana an'ity horonantsary manaraka ity.
Nividy izahay a microphone lavalier mora vidy amin'ny Amazon… $ 60 miampy fandefasana sy fikirakirana izany. Handre feom-bitika kely ianao avy eo ary somary mitombina izany, fa raha oharina amin'ny mikrô anatiny ao anaty fampirantiana Apple Thunderbolt $ 1,000, dia alina sy alina tokoa izany. Aza hadino ny mijery ilay horonan-tsary manontolo handrenesana ny tsy fitovizany.
Mikrôpônika voalohany tsara dia an Audio-Technica AT2005USB Cardioid Dynamic USB / XLR Microphone ary eo ambanin'ny 100 $ izany. Ampiasainay amin'ny podcast, fandraisam-peo ary hatramin'ny antso an-tsary Skype aza izany. Azo entina sy mora entina eny an-dalana ianao.
Raha tena te-hivoaka ianao dia afaka mividy roa Sennheiser EW122PG3-A Camera Mount Wireless Lavalier Microphone Systems ary ny Zoom PodTrak P4 Podcast Recorder. Ny fatiantoka tokana ao dia raha tsy azonao ampidirina ao amin'ny fakantsarinao ilay mikrô lavalier dia mila mampiasa ilay recorder Zoom ianao ary avy eo ampifanarahana amin'ny rindrambaiko fanovana video anao ny audio sy ny video. Miala amin'ny sehatry ny mora anefa izany, izay mifanohitra amin'ity andiany ity.
Fialana andraikitra: Mampiasa ny rohy ifandraisako amiko mandritra an'ity lahatsoratra ity ho an'ny Amazon aho.
Tags: apogee mictenymora Lavalier micmikrofona lavalierfandraketana feomitaingina lavaliermitaingina mikraoba lavaliermitaingina miczoom digital recorder
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fahafahan'ny mailaka mankany amin'ny Inbox